Mijoro eo anoloan’ireo manam-pahefana
Ary ho entiny eo anatrehan'ny mpanapaka sy ny mpanjaka hianareo noho ny amiko, ho vavolombelona aminy sy amin'ny jentilisa." - Mat. 10:18.
Tsy ho ela intsony dia tsy maintsy hijoro ho vavolombelona eo anoloan'ireo mpanapaka eto an-tany ny vahoakan'Andriamanitra. Tsy ampy iray amin'ny olona roapolo akory no mahatakatra fa haingana tokoa no hanakaikezantsika ny fotoan-tsarotra lehibe eo amin'ny tantara. (...) Tsy manana isika na dia fotoana kely monja aza holanina amin'ny zava-poana sy ny rendrarendra ary ny eritreritra tsy mahasoa.(...)
Handre ny momba anao amin'ny alalan'ny tatitra entin'ireo mankahala anao ny mpanjaka sy ny governora ary ny manam-pahefana. Tatitra diso momba anao no hatao eo anatrehan'izy ireo. Hiseho eo anatrehan'ireo mpiampanga azy ireo izay hiharan'ny fiampangana tsy marina ka hampamoahina ny amin'ny tenany. Hanana tombontsoa izy ireo hitondra ny fahazavana eo anatrehan'ireo antsoina hoe manam-pahefana eto an-tany. Raha nandinika ny Baiboly ianao, raha vonona hamaly izay rehetra manontany ny amin'ny fanantenana ao anatinao amin-kalemem-panahy sy fanajana dia tsy hahatohitra ny fahendrenao ireo fahavalonao.
Azonao atao izao ny hanatratra ny fahalalana ambony indrindra amin'ny alalan'ny fandinihana ny Tenin'Andriamanitra. Raha malaina kosa isika ka tsy mihady lalina kokoa ao amin'ny lavaka fihadiana ny fahamarinana dia tsy ho vonona hiatrika ny fotoan-tsarotra izay ho avy tsy ho ela. Aoka ho tsapanao fa sarobidy toy ny volamena ny fotoana tsirairay. Ho vonona tanteraka ianao raha toa iainanao ny teny rehetra izay aloaky ny vavan'Andriamanitra.- RH, 26 Aprily 1892.
Tsy fantatrao ny toerana hiantsoana anao hijoro ho vavolombelon'ny fahamarinana. Marobe no tsy maintsy hijoro eo anatrehan'ny fitsarana. Ny sasany kosa hijoro eo anatrehan'ny mpanjaka sy ireo manam-pahalalana eto an-tany, mba hampamoahina ny amin'ny finoany. Tsy afaka hanazava tsara ny Soratra Masina sy hanome ny antony mazava momba izay inoany ireo tsy manana afa-tsy fahatakarana ivelambelany fotsiny ihany ny fahamarinana. Ho sahiran-tsaina izy ireo ka ho tonga mpiasa mahazo henatra. Aoka tsy hisy hihevitra fa tsy ilainy ny mianatra satria tsy hitory teny eny amin'ny polipitra izy. Tsy fantatrao izay hasain'Andriamanitra ataonao.- FCE, t. 217